လတ်တလော အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတွေနဲ့ ဖြစ်နေတာတွေ ~ White Angel
လတ်တလော အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတွေနဲ့ ဖြစ်နေတာတွေ
3:01 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 14 comments
“လတ်တလောအဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတွေနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ”.. ဆိုပြီး မောင်လေး ကိုကိုးအိမ်က တဂ်လာတဲ့ ပို့လေးပါ။
(၁) အစားချင်ဆုံးအစားအစာ -
အစားချင်ဆုံးအစားအစာရယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး၊ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို မြန်မာပြည်နဲ့ဝေးနေရတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာအစားအစာအားလုံးကို တမ်းတမိပါတယ်။
တရုတ်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ရသူမို့ တရုတ်ဟင်းတွေနဲ့နှစ်ပါးသွားနေရတဲ့အချိန်။ “ကောင်းလိုက်တာ နတ်သမီးရယ်” လို့ မပြောနဲ့..၊ ၇နှစ် နီးပါးစားလာရတာ.. မစားချင်တော့ဘူး။း(
(1) ESTEE LAUDER ,( EAU DE PRIVATE COLLECTION SPRAY, atomiseur naturel,) / (2) LUCKY WOMAN (EAU DE TOILETTE) ဆိုက်ပရပ်စ်မှာ ဘယ်လိုမှရှာမရပါ..။ သူ့ရဲ့အနံ့လေးက ပိတောက်ပန်းအနံ့လေးနဲ့တူလို့ အရမ်းနှစ်သက်မိလို့ပါ။
GUCCI (Eau de Parfum II ) / BVLGARI ( Jasmin Noir) / VERSACE (BRIGHT CRYSTAL)
ကဗျာ (သို့) အဖြူရောင်သံစဉ်မှ တဆင့် သီချင်းလက်ဆောင် လိုချင်ပါသည်
လူအများစုနဲ့မတူတဲ့ (အသုံးပြုသူ နည်းသော)အဆန်းအပြား ပုံစံလေးများ
SAMSUNG Corby pro(GT-B5310)
တိတ်ဆိတ်တဲ့ညတွေမှာ အဖော်ပြုလေ့ရှိတဲ့ ပင်လယ်ပြင်က လှိုင်းသံ ၊
ပြီးတော့ ရိမ်မိုး၏ “ရင်ကွဲလိပ်ပြာ”
ဘလော့ဂ်ထဲက ကဗျာဆရာအားလုံးရဲ့ ကဗျာပေါင်းချုပ်(စီစဉ်ပေးတဲ့သူများရှိခဲ့ရင်ပေါ့)
မိသားစုတခုရဲ့ တာဝန်ကျေသော အိမ်ထောင်ရှင်မတယောက်(မိန်းမစိတ် အပြည့်အဝရှိချင်လို့ပါ)
အရင်ဘဝက ၀ဋ်ကြွေးများပါခဲ့ရင် ဒီဘဝမှာကျေပါစေသား
နယ်တစ်ခုမှာပဲ..၊ ကျောက်တောင်နံရံတွေမှာ အရုပ်တွေကပ်ပြီး ထုထားတယ်၊ ကျောက်ဂူတွေလည်းရှိတယ်၊ ဆင်ရုပ် မြင်းရုပ်တွေပေါ်မှာ ဘုရားတွေတည်ထားတယ်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့မှာ မြန်မာ့အသံက မေတ္တာပို့ ဘုရားသီချင်းမှာ အဲဒီနေရာပါတယ်..။ နာမည်မေ့နေလို့..၊ သိရင်ပြောပေးကြပါ..။ သွားရတဲ့ ခရီးလမ်းက နဲနဲကြမ်းတယ်လို့ပြောကြတယ်..။
(၁၆)သွားဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ (နေ့စဉ်) -
အလုပ်နဲ့အိမ်၊ အိမ်နဲ့အလုပ်..း(
ခံစားချက်ကို အဓိကရိုက်ပြထားတဲ့ “ နှလုံးသားမြို့တော်”( နေအောင်၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ ခင်သီတာထွန်း) ကိုထိန်လင်း(ဗီဒီယို)ရေ.. ကူညီနိုင်မလား..?
မိမိရဲ့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန်းသိမ်းပါ။
လူအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး ထားကြပါ။
ဆိုင်(၃)ဆိုင်အတွက် ဝန်ထမ်းဝတ်စုံတွေကို ဒီဇိုင်းထွင်ချုပ်လုပ်နေရသော ကာလ။
ကွန်ပျူတာနှင့် ခပ်အေးအေး သီချင်းများ
ကိုယ်မကြွမ်းကျင်သော အလုပ်၊ စိတ်မဝင်စားသောအလုပ်ကို တယောက်ယောက်မှ မိမိကို လုပ်ခိုင်းသည့်အခါမျိုး၊ အကူညီတောင်းလာသည့်အခါမျိုး။
on line / off line က သူငယ်ချင်းများ
ဖုန်း၊ ကင်မရာ၊ အလှပြင်ပစ္စည်းစုံ
မေမြို့လိုနေရာလေးက ခေါင်မိုးချွန်ချွန်ထင်ရှူးအိမ်လေးတလုံးနဲ့ ပန်းခြံလေးထဲမှာ မိသားစုနဲ့အတူ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိတဲ့ ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတွေထဲက ဇာတ်ကောင်တွေ အပြင်မှာ တစ်ကယ်ရှိတယ်ဆိုပဲ..။
ရင်ထဲက ဆန္ဒနဲ့ လက်တွေ့ဘဝ တထပ်ထဲ ကျမယ့်အချိန် (ခုတော့.. ရုန်းကန်နေရတုန်းပဲ)
အစ်မ အသွားချင်ဆုံးနေရာက ဖိုးဝင်းတောင်လား?
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်တယ်ဟုတ် . . .
နံပါတ် (15 ) နေရာလေး သွားရင် ခေါ်ပါ...
(ဗီဇာ ပို့ပေးလိုက်ပါ ၊ ပီဇာ လည်း ၀ယ်ထားပါစေ)
34 မှာ တူနေတယ်..
၃၈....စာဖတ်သူနဲ့ ထပ်တူအကျဆုံး ခံစားချက်ဝါသနာ(နံပါတ်.၈)
တဂ်စာကို ဖတ်သွားကြောင်းပါခင်ဗျ။ ရင်ထဲက ဆန္ဒနဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ တထပ်တဲ့ ကျပါစေလို့ ....
နတ်သမီးပြောတဲ့ အသွားချင်ဆုံးနေရာက ဒီနေရာ ထင်တယ်။ ၀င်ကြည့်လိုက်ပေါ့။
ဖိုလ်ဝင်တောင် နှင့် ရွှေဘတောင်လေ။ မုံရွာက မဟုတ်လား။
ဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့ မသိ။ ထင်ရာမြင်ရာ ပြောသွားသည်။
အားလုံး ကောင်းပါ့ ကောင်းပါ့။ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ရေးပြတော့လဲ သိခွင့်ရတာပေါ့။ သူကြီးမင်းကတော့ တဂ်စာတွေ ရှောင်ထားတယ်။း))))
ps:စက်ချုပ်တော့လည်းခါးနာတာနဲ့ဆိုင်မယ်ထင်တယ် ခါးကိုမတ်မတ်ထားပြီးအိပ်ရင်ခါးနာသက်သာတယ်လို့ ဆရာဝန်မပြောဖူးတယ် ကွေးမအိပ်သင့်ဖူးခါးနာချိန်မှာလေး)
ရေမွှေးကြိုက်တာချင်းတော့ တူမှာ သေချာပါတယ်
ခရီးသွားရတာကြိုက်တယ် အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတွေမှာ နေချင်တယ်
နတ်သမီးရဲက ဆန္ဒတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေ အားလုံး ဖြစ်လာပါစေနော်
ရေမွှေးနဲ့ နှလုံးသားမြို့တော်အခွေကို ပို့ပေးလိုက်ချင်လို့...ဘယ်လို ပို့ပေးရမှာလည်း...ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေ...
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ပြီး၊ စိတ်ကိုမယုံဘူးဆိုတော့……..
ဖိုလ်ဝင်တောင် သွားတဲ့ ခရီးလမ်းကတော့ မကြမ်းပါဘူး......တခြားနေရာဖြစ်မယ်....ဖိုလ်ဝင်တောင် သွားချင်ရင် မုံရွာမြို့ ကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့ နာရီဝက်လောက်ဆို ရောက်ပါတယ်....အမ ပြောတဲ့ အရုပ်တွေတော့ ရှိတယ်....အေဒီ ၅ ရာစု ၆ရာစု လောက်က အရုပ်တွေ လားမသိဘူး...ရောက်ခဲ့တာကြာတော့ မမှတ်မမိတော့ဘူး....နောက်တခေါက် လာပြီး မှတ်တမ်း လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူး ပြီးပြန်လာခဲ့တာ..မျောက်တွေ ပေါတယ်
နတ်သမီးရေ...အလုပ်များပေမယ့် ဘလော့ဂါ မိတ်ဆွေကောင်းတွေကို ခင်မင်ရင်းစွဲရှိတာမို့ လိုင်းပေါ်မတက်ရင် မနေနိုင်ပြန်တာကြောင့် ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပေါ့လား...ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်တည်းကျဖို့ မလွယ်လှတဲ့ ဒီဘ၀မှာ နတ်သမီးတစ်ယောက် ဖြစ်သမျှအခြေအနေကို ကျေနပ်ပါစေကြောင်း မေတ္တာမွန်နဲ့သာ ဆုတောင်းပေးပါရစေတော့လား....